Virtual Yekutenga Mubatsiri: Inotevera Hukuru Kuvandudza muEcommerce?
China, July 11, 2019 China, July 11, 2019 Jake Rheude
Ndi2019 uye unopinda mune chitoro-uye-dhaka chitoro chekutengesa. Kwete, uku hakusi kuseka, uye handiyo punchline. ECommerce inoenderera ichitora kuruma kukuru kubva payi yekutengesa, asi kuchine zvisati zvamboitika zviitiko kana zvasvika kune hunyanzvi uye nyore kwezvidhinha nedhaka. Imwe yemiganhu yekupedzisira kuvepo kweanoshamwaridzika, anobatsira shopu mubatsiri. "Ndingakubatsire sei?" chinhu chatajaira kunzwa